नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : फुल माला सहित अभिनन्दन थाप्ने हतार प्रहरीलाई पटक्कै सुहाएन !
फुल माला सहित अभिनन्दन थाप्ने हतार प्रहरीलाई पटक्कै सुहाएन !
नेपाल प्रहरी फेरी पनि नैतिक रूपमा चुकेको छ । भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न एक सरकारी कर्मचारी पक्राउ भनेको भोलि पल्ट छिमेकी र सोही स्कुलमा पढ्ने दिनेश भट्टलाई प्रहरीले सार्वजनिक गर्‍यो । अनुसन्धानका क्रममा भनौँ लौ चित्त बुझाऊँ । मेरो मनमा अझै पनि एउटा प्रश्न उठिरहेको छ - १७ बर्षको एउटा केटोले आफु भन्दा ठुली भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या एक्लै कसरी गरे होला ? प्रहरी अनुसन्धान र छानबिनको गहिराइमा अझै पुगे जस्तो लागेन है । अनुसन्धान टुङ्गोमा नपुग्दै, अदालतले दोषी करारको फैसला नगर्दै प्रहरीका डिआइजी सहितले खादा, फुल माला सहित अभिनन्दन थाप्नु अनैतिक काम भएन र ?? नेपाल प्रहरी पनि अब नेता कार्यकर्ता र झोलेहरू जस्तै बनेको देख्दा कत्ती पनि चित्त बुझेन । खोइ निर्मला र निर्मला जस्ता अनेकौं चेलीहरुको बलात्कारको टुङ्गो भन्दै जनताले प्रश्न उठाइरहेकै बेला फुल माला सहित अभिनन्दन थाप्ने हतार प्रहरीलाई पटक्कै सुहाएन । यसको अर्थ यो पनि नलगाउनुहोला कि - उक्त १७ बर्षको केटो हत्यारा होइन भनेर । उही हुन पनि सक्छ तर कानुनी अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै प्रहरीका हाकिमहरुले खादा, फुल माला सहित अभिनन्दन थाप्नु हतार मात्र होइन अनैतिक काम पनि हो जस्तो लाग्छ । प्रहरी महानिरीक्षक, गृह, सरकारकै ध्यान जाओस । सत्य तितो हुन्छ ।